स्वास्थ्य/जीवनशैली – Janamanch.com
कपाल लामो भएको कसलाई मन पर्दैन र ? सबैलाई आफ्नो कपाल लामो र सुन्दर होस् भन्ने इच्छा हुन्छ । तर लामो कपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जेलिइरहनु हो । जेलिएर लट्टा परेपछि लामो कपाल भएकाहरू हैरान हुनुपर्छ । नुहाएर सुकेपछि लामो कपाल अल्झिने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले नुहाउँदा नै कोर्नुपर्छ ।स्याम्पु र..
काठमाडौं, ५ जेठ– पछिल्लो समय धेरै नेपालीलाई उच्च रक्तचापको समस्या देखिन थालेको छ । स्वस्थकर खानपान, शारीरिक व्यायाम, मानसिक तनावजस्त कारणले उच्चरक्तचापलाई बढाइरहेको छ । मसिनी विकले उच्च रक्तचापको समस्या भएर औषधि खान थालेको वर्ष दिन भयो । सिक्रे नुवाकोटकी विक गाउँमै औषधि नपाइने भएकाले काठमाडौँ आएर..
बागलुङ, ४ जेठ– जिल्लाका दशमध्ये आठ स्थानीय तह पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भएका छन् । बागलुङ नगरपालिका र बडीगाड गाउँपालिका घोषणाको तयारीमा छन् । गत पुसमा ढोरपाटन नगरपालिका पहिलो खोपयुक्त नगर बनेको थियो । त्यसयता, गलकोट नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, काठेखोला गाउँपालिका, बरेङ गाउँपालिका,..
संकास्पद रोगीहरुको खकार संकलन
बागलुङ, २८ बैशाख– जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका–७ जैदीमा शंकास्पद क्षयरोगका बिरामीको खकार संकलन गरिएको छ । जैमिनी नगरपालिकाको आयोजना र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा जैदीका १ सय १५ जना शंकास्पद बिरामीको खकार संकलन गरिएको हो । क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी जनचेतनाको लागि नगरपालिकाको बार्षिक..
कृष्ण कुमार शैजु एड्स: सुन्दा, बोल्दा, असहज हुने र दुर्भाग्यावस आफ्नै असावधानिले गर्दा एड्स भइहाले सोंच्दा मात्र पनि प्राय मानिसहरू तर्सिन्छन्।तर उच्चित जिवन यापन सजग र सावधानि पुर्न जिवन जिय त्यस्ता भयानक समस्याको छाँया सम्म पनि हाम्रो जिवन मा पर्दैन । बिस्व स्वास्थ संगठन (WHO) ले एड्स रोगको रोकथाम..
स्वास्थ्य क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने मन्त्री अर्यालको उद्घोष
काठमाडौं, २६ बैशाख-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका सिण्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरेकी छिन्। उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र रहेका सबै खाले बेथिति तथा सिण्डिकेट तोड्छु।’ बुधबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री..
६ करोड मानिसले हेरिसके यो भिडियो !
बागलुङ, २६ बैशाख-सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा धूम्रपानका कारण फोक्सोको हालत के हुन्छ भनी देखाइएको छ । भिडियो अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाको एक नर्सले बनाएका हुन् । यसमा एक व्यक्तिको असली फोक्सो देखिएको छ । ऊ विगत २० वर्षदेखि धूम्रपान गरिरहेको थियो । यसैले गर्दा उसलाई..